Codad+Warbixin: Jawaasiis U Shaqeynayay Dowladda Mareykanka iyo Cadow Maxalli Ah Oo Lagu Dilay Duleedka Magaalada Baydhabo.
Sunday December 24, 2017 - 21:12:17 in Wararka by Super Admin
Maxkamad islaami ah oo taabacsan XarakadaAl-Shabaab ayaa xukun dil ah waxay ku ridday dhowr ruux oo lagu eedayay in ay la shaqeynayeen sirdoonno caalami ah iyo kuwa maxalli ah oo dagaal kula jira shacabka muslimka Soomaaliyeed.
Deegaanka Iidaale oo qiyaastii magaalada Baydhabo ujira 60 KM ayaa maanta gelinkii dambe lagu dilay illaa iyo 5 Ruux oo la shaqeynayay dowladda Mareykanka,Dowladda Federaalka iyo maamullada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed.
Qaadiga Maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada Bay iyo Bakool ayaa fagaarihii dilku ka dhacayay ka akhriyay dambiga lagusoo eedeeyay Ragga lagu dilay deegaanka Iidaale.
Hoos Ka Akhri Magacyada Jawaasiista ladilay iyo dhinacyada ay la shaqeynayeen.
Halkan ka dhageyso Qaadiga Maxkamadda oo xukunka ridaya MP3